Naghachi akwukwo Okwu site na Temporary Faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen Word Repair Naghachi akwukwo Okwu site na Temporary Faịlụ
iji DataNumen Word Repair iji weghachite akwụkwọ Okwu site na Temporary Faịlụ
4.90 / 5 (site na 1,495 votes)
Mgbe gị Okwu akwụkwọ (*. DOC ma ọ bụ * .DOCX faịlụ) na-emebi ma ọ bụ rụrụ arụ n'ihi dị iche iche ihe na ị na-ike naputa chọrọ data ya. Mgbe ahụ Microsoft Okwu ga-emepụta temporary faịlụ mgbe ị na-edozi akwụkwọ ahụ, ọ ka ga-ekwe omume iweghachite data sitere na Okwu temporary faịlụ, na DataNumen Word Repair.
Microsoft Knowledgebase na-akọwapụta nkọwa zuru ezu banyere ogerary faịlụ ọ ga - emepụta mgbe ị na - edozi akwụkwọ. Yabụ mgbe ọdachi data mere, ịnwere ike ịgbaso ozi ahụ iji chọta oge ahụrary faịlụ ndị nwere ike ịnwe data bara uru, wee jiri DataNumen Word Repair i scanomi ma naghachi data site na fa? l?
Ugbu a DataNumen Word Repair na-akwado na-agbake site .wbk temporary faịlụ na .asd AutoRecovery chekwaa faịlụ.
Maka .wbk temporary faịlụ, enwere ike ịchọta ozi zuru ezu na Ebe a. Nọmalị ọ ga-azọpụta ndị na-esonụ ndekọ:
C: Akwụkwọ na Ntọala DataMicrosoftWord (n'ihi na Windows XP)
C: Ndị ọrụ DlọtaRoamingMicrosoftWord (N'ihi na Windows 7)
N'ihi narary faịlụ, enwere ike ịchọta ozi zuru ezu na Ebe a. Nọmalị ọ ga-azọpụta ndị na-esonụ ndekọ:
Iji mee mgbake ahụ, biko soro usoro ndị a n'okpuru:
Cheta na: Tupu ị gbakee ogerary Okwu faịlụ na DataNumen Word Repair, biko mechie Microsoft Okwu na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta oge ahụrary faịlụ.
Họrọ mmebi ahụ mebiri emebi ma ọ bụ nke rụrụ arụrary Okwu .tmp ma ọ bụ .asd faịlụ ka emezi.
Nwere ike itinye oge ahụrary Okwu .wbk ma ọ bụ .asd aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na họrọ faịlụ niile (*.) dị ka ụdị faịlụ ahụ iji chọgharịa ma họrọ faịlụ ahụ.
Site na ndabara, DataNumen Word Repair ga-echekwa faịlụ Okwu edozi dị ka xxxx_fixed.doc, ebe xxxx bụ aha isi mmalite Okwu .doc faịlụ. Ọmụmaatụ, maka isi iyi temporary Okwu faịlụ bụ ~ wrf0000.wbk, aha njirimara ndabere maka faịlụ ahụ edoziri ga-abụ ~ wrf0000_fixed.doc. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
pịa bọtịnụ, na DataNumen Word Repair ga start na-enyocha ma rụkwaa isi iyi temporary Faịlụ faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ma ọ bụrụ na isi iyi temporary Okwu faịlụ nwere ike ịrụzi nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu Okwu faịlụ na Microsoft Okwu ma ọ bụ ndị ọzọ dakọtara ngwa.
Cheta na: Demdị ngosi ga-egosipụta igbe ozi na-esonụ iji gosipụta ihe ịga nke ọma nke mgbake:
na i nwere ike imeghe ofu faịlụ ịhụ natara akwụkwọ. Dị ka akwụkwọ natara, ị nwere ike ịma ma DataNumen Word Repair nwere ike naghachi gị temporary Okwu faịlụ nke ọma ma nweta ihe ị chọrọ. Agbanyeghị, mbipute ngosi ahụ agaghị echekwa faịlụ fajiri. Biko ịtụ ụdị zuru ezu iji nweta faịlụ ahụ.